किन धमाधम उद्धार उडान रद्द हुँदैछन् ? – अब दैनिक
किन धमाधम उद्धार उडान रद्द हुँदैछन् ?
बिराटनगर;-अन्य कुरा यथावत रहेको थियो भने आज बिहान ६ बजेर १५ मिनेटमा नेपाल एयरलाइन्सको विमान उद्धार गरेर ल्याउने यात्रु लिन युएईको दुबईलाई उडान भर्दै हुन्थ्यो । किनभने दुबईबाट उद्धार गरेर ल्याउने नेपाली लिन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर उडान हुने तयारीमा थियो ।
तर युएई दूतावासले सोमबार साँझ मात्रै नेपाल एयरलाइन्सलाई एउटा इमेल पठाएर तत्कालका लागि उडान स्थगित गरिएको र पुनः आवेदन दिन भनियो । यद्यपि पहिले नै उडान अनुमति लिइसकेको अवस्थामा त्यो अनुमतिलाई खारेज गर्दै पुनः आवेदन दिन किन भनिएको हो, त्यो उल्लेख गरिएको छैन ।मंगलबार बिहान दुबईका लागि तयारी गरिएको उडान मात्रै स्थगित भएको छैन, मंगलबार राति ९ बजे कतारको दोहाका लागि तयारी भएको उद्धार उडान पनि एकाएक रद्द गर्नुपर्यो ।